Ibhedi yeNdlu yeBarrel kunye nesidlo sakusasa - I-Airbnb
Ibhedi yeNdlu yeBarrel kunye nesidlo sakusasa
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLauren
I-Barrel House Bed & Breakfast yindawo yokubaleka yaseKentucky enika iibhedi ezi-2 zokumkani, ishawari etofotofo kunye nembono ephefumlayo. Sinikezela ngekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nenani lesidlo sakusasa osilungiselela ngalo naliphi na ixesha olifunayo. Kufutshane ne-Abbey yaseGetsemani, oololiwe, iimyuziyam, iipaki, imbali kunye neyokugqibela kodwa kude neyona ndlela idumileyo yebhourbon. Inguqulelo yethu yobomi basebusuku ithontelana ukuya kumgodi womlilo ngokugalela okulungileyo, abahlobo abalungileyo kunye nombono omangalisayo weenkwenkwezi.
Sikufutshane ngokwaneleyo kuninzi lwezinto ezinokunikelwa yiKentucky, kodwa kude ngokwaneleyo ukusuka kukuphithizela kunye nokuphithizela ukuxabisa ngokupheleleyo ukuhlala kwelizwe. Ngeendawo ezininzi ezivaliweyo ngenxa ye-Covid 19, kubaluleke kakhulu ngoku kunangaphambili ukufumana indawo yokonwaba ngaphandle kokuyishiya! Sinikezela ngamava angaphandle ... aphuculwe! Ukuloba, ukuqubha, ukukhwela intaba kunye nendawo yokucima umlilo ukuze uhlale ujikeleze kwaye uphumle. Siyakwazi ukukunika iinkuni ezinongwe ngeedola ezingama-20 ngobusuku okanye i-$ 65 engenamkhawulo. Unokuzizisa iinkuni zakho okanye ukuba unomdla, ungazifunela ngokwakho.
4.95 · Izimvo eziyi-112
Ngamanye amaxesha ehlotyeni, sinabantu abahamba ngamaqela ezantsi kwendlela ngamavili angama-4 kunye nokunye. Sivakalelwa kukuba inika ilizwe elingakumbi kwintamo yethu yehlathi. Amahashe ahamba ngendlela ngokunjalo ngoko unokufuna ukuwabukela ngamaxesha athile. Izinja zasebumelwaneni zidla ngokuzulazula zikhululekile, kodwa akukho zimbi kwelo qela.
Bill and I love to host get togethers and meeting new people, which is one of the reasons we decided to become a B & B. Bill is a retired wood worker and I still work part time. Our interests are, of course woodworking, gardening, reading, bourbon and history & genealogy.
Bill and I love to host get togethers and meeting new people, which is one of the reasons we decided to become a B & B. Bill is a retired wood worker and I still work part time. Ou…
Sihlala ngqo ngaphaya kwendlela esuka kwi-Barrel House kwaye siyafumaneka ukuze sikuncede nanini na xa uyifuna. Siyathanda ukwazi iindwendwe zethu kwaye siyathanda ukonwabisa xa kunokwenzeka. Ukuba ukukhanya kweveranda kuvuliwe, wamkelekile ukuba uhle kwaye uphuze, ujabulele i-cigar kunye nencoko emnandi.
Sihlala ngqo ngaphaya kwendlela esuka kwi-Barrel House kwaye siyafumaneka ukuze sikuncede nanini na xa uyifuna. Siyathanda ukwazi iindwendwe zethu kwaye siyathanda ukonwabisa xa ku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- New Hope